နှစ်သစ်မှာ ဘဝတွေသစ်လွင်ကြပါစေ - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
Posted by ukkmaung on April 14, 2014 at 12:00pm
မကြာမီသောရက်တွင် အတာသင်္ကြန်ကုိုရောက်တော့မည်။ အတာ သင်္ကြန်တွင် မြန်မာတုို့ရုိုးရာ ဓလေ့အတုိုင်း နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်ကုို ပျော်ရွှင်စွာကျင်းပကြတော့မည်။ အတာသင်္ကြန်သည် မြန်မာတုို့ အဖုို့ သမုိုင်းစဉ်ဆက်ကျင်းပခဲ့၍ စွဲလမ်းရသော နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ပင်ဖြစ်သည်။ လူမျိူးအသီးသီးနုိုင်ငံအသီးသီးသည် မိမိတုို့၏သတ်မှတ်ချက်အရ နှစ်သစ်ကုိုကြိူဆုိုကြသည်။ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများကျင်းပကြသည်။ ထုိုသုို့ နှစ်သစ်ကုို ကူးကြ ကြိူဆုိုကြသည်အခါ လူတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးမတူကြချေ။
အချို့က ဘာသာရေးအရ ဒါန သီလ ဘာဝနာများဖြင့်ကူးကြသလုို အချို့ကပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများဖြင့် ကြိူဆုိုကြသည်။ အချို့က အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်းနှင့်အချို့က ဘုရားဖူးခရီးထွက်ခြင်းတုို့ဖြင့် နှစ်သစ်ကုို ကူးကြပြန်သည်။ အချို့က ဘာမှမလုပ်ဘဲ အိမ်တွင်အေးအေးဆေးဆေး နေထုိုင်ကြသည် များလည်းရှိကြသည်။ မည်သုို့ဖြစ်စေ သတ်မှတ်ချက်အရ နှစ်ကာလ အသစ်တစ်ခု ဆီသုို့
ပြောင်းသွားရသည်မှာတော့အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ အမှန်စင်စစ် သူ့အလုိုလုိုလည်ပတ်နေသော ကမ္ဘာ့ဖြစ်စဉ် ဥတုနိယာမဖြစ်စဉ် စကြာဝဠာဖြစ်စဉ်သဘာဝနိယာမကုို လူသားများက နှစ်များ လများ ရက်များသတ်မှတ်၍ဘဝခရီးကုို ဆက်နေကြသည်ဟု မြင်မိသည်။
ထုို့ပြင် လူသားအများစု၏သဘာဝသည် အသစ်ဆုိုလျှင်တမ်းတတတ်ကြသည်။ လုိုချင်မက်မောတတ်ကြသည်။ ပစ္စည်းကုိုလည်း အသစ်လုိုချင်သည်။ အိမ်ထောင်ဖက်ကုိုလည်း အသစ်လုိုချင်သည်။ နှစ်သစ်ကုိုလည်း သဘောကျကြသည်။ အနုပညာတွင်လည်း ဆန်းသစ်မှုကုို ကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်ပင်။ အစုိုးရများတွင်လည်း သစ်လွင်တောက်ပသော ထက်မြက်သော အစုိုးရကုိုသာလုိုချင်ကြသည်။ ဤသုို့စသည်ဖြင့် အသစ်မှန်သမျှကုို အများစုက တမ်းတကြ လေသည်။ အကြောင်းမှာ အသစ်ဟူသောသဘောတွင် သစ်လွင်သန့်စင်ခြင်း သဘော ပါဝင်နေသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်ဟု ကောက်ချက်စွဲမိသည်။
မှန်၏။ အဟောင်းဆုိုလျှင် ညစ်နွမ်းပြီးဖြစ်သည်၊ သုံးစွဲပြီးဖြစ်သည်၊ သန့်စင်သစ်လွင်သော သဘောမရှိဟု အများစုက သတ်မှတ်ထားကြလေသည်။ လူသား၏သဘာဝသည် သန့်စင်ခြင်း သစ်လွင်ခြင်း တောက်ပခြင်း ထက်မြက်ခြင်းကုို ဗီဇအရလုိုလားကြသောကြောင့် ဤသို့ အသစ် အသစ်များကုို တမ်းတကြသည်ဟု ယူဆမိသည်။ လူသား၏မူလဗီဇသဘာဝအရ သစ်လွင် သန့်စင် မှုကုို လုိုလားကြသော်လည်း မိမိတုို့၏နေ့စဉ်ဘဝများတွင် အမြဲလုိုလုိုညစ်နွမ်းနေကြသည်က များနေမည်ထင်သည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဓမ္မအရဆုိုလျှင် စိတ်သစ်နေဘုို့သာ ပဓာနဖြစ်သည်။ မှန်၏။ စိတ်သစ်လျှင် စကားလည်းသစ်မည်။ အလုပ်လည်းသစ်မည်။ သုို့ဆုိုလျှင် ဘဝလည်းသစ်နေမည်သာဖြစ်သည်။ ဘဝသစ်နေလျှင် အမြဲတန်းနေ့တွေသစ်နေပေတော့မည်။ လတွေလည်းသစ်နေပေတော့မည်။ လတွေသစ်နေလျှင် ကမ္ဘာတည်သရွေ့  နှစ်သစ်တွေသာဖြစ်နေပေတော့မည်။ သုို့ဖြစ်လျှင် ဤကမ္ဘာ ဤလောကသည်အစဉ်အမြဲသစ်လွင်၍တုိုးတက်နေမည်သာဖြစ်သည်။
ထုို့ကြောင့် မိမိတုို့ရွှေမြန်မာများနှစ်သစ်ကူးကြသောအခါ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဓမ္မနည်းလမ်းအရ ပြည့်ပြည့်ဝဝကူးနုိုင်ကြလျှင် ကမ္ဘာတွင်စံပြနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ဖြစ်မည်ဟု ယုံကြည်မိသည်။ အမှန်စင်စစ် မြတ်ဗုဒ္ဓသည် နှစ်သစ်ကူးတရားဟူ၍ သီးသန့်ဟောကြားတော်မမူခဲ့ပေ။ စိတ်ထားသစ်ရေး စကားသစ်ရေး အလုပ်သစ်ရေး ဘဝသစ်ရေးကုိုသာ လမ်းညွှန်တော် မူခဲ့လေသည်။ အထူးသဖြင့် နှစ်သစ်ကူးကောင်းဖုို့ထက် ဘဝသစ်ကူးကောင်းဖုို့နှင့် လက်ရှိဘဝသစ်လွင်ဖုို့တုို့ကုိုသာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဓမ္မအရ ဤစကြာဝဠာတွင် လူသားသည်သာ တန်ဘုိုး အကြီးမားဆုံး ဖြစ်သည့်ပြင် လူသားသည်သာပဓာနဖြစ်သောကြောင့် လူများသစ်လွင်နေဖုို့သာပဓာနဖြစ်လေသည်။ လူသားများသာသစ်လွင်နေပါလျှင် ဤကမ္ဘာသည်တာဝတိံသာဘုံနှယ် တင့်တယ်နေပေလိမ့်မည်။ မှန်၏။ လူသား၏စိတ်ထားများသာ သစ်လွင်သန့်စင်နေပါက သဘာဝတောတောင်တုို့သည်လည်း ညုို့ညုို့မှိုင်းမှိုင်းဖြင့် အုံ့ဆုိုင်းကာသာယာနေပေမည်။ သဘာဝမြစ်ချောင်းအင်းအုိုင်တုို့သည်လည်း လူသားတုို့၏ရက်စက်မှု ကန့်သတ်မှု မတရားအဆင်ခြင်မဲ့စွာအသုံးပြုမှုတုို့မရှိဘဲ သဘာဝအတုိုင်းပင် လွတ်လပ်စွာစီးဆင်းခွင့်ကုိုရကြပေမည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လည်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်နုိုင်တော့ ပေ။ သုို့ဆုိုလျှင် မပျက်စီးသော သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လူသားသည် သက်ရှည်ကျမ္မာ သာယာစွာ နေထုိုင်နုိုင်ပေလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့် လှပသောသဘာဝတောတောင် အင်းအုိုင် မြစ်ချောင်းများနှင့် အနီးကပ်နေထုိုင်ကြရသော လူများသည် ဖြူစင်ရုိုးသားကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။
မှန်၏။ သဘာဝတောတောင်ကုို မဖျက်ဆီးဘဲ ချစ်ခင်တန်ဘုိုးထားသောသူသည် သဘာဝဖြူစင်သောစိတ်အခံရှိလေသည်။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကုို တန်ဘုိုးမထားဘဲ ဝိသမလောဘဇောတုိုက်၍ ဖျက်ဆီးသူသည် ဖြူစင် ရုိုးဖြောင့်သောစိတ် နည်းပါးပေမည် သုို့မဟုတ် ဖြူစင်မှုမရှိဟုထင်သည်။
ဓမ္မပဒပါဠိတော်တွင် မနောပုဗ္ဗင်္ဂမာ ဓမ္မာ၊ မနောသေဋ္ဌာ မနောမယာ။ မနသာစေ ပသန္နေ၊ ဘာသတိဝါ ကရောတိဝါ။ တတော နံ သုခမနွေတိ၊ ဆာယာဝ အနုပါယိနီ။ Mind precedes all mental states. Mind is their chief; they are all mind-wrought. If withapure mindaperson speaks or acts, happiness follows him like his never-departing shadow. ဟူ၍ဟောတော်မူပါသည်။
ဤဒေသနာတော်ကုို ကောက်ချက်စွဲကြည့်လျှင် လူသားများ၏စိတ်ထားသည်သာ ပဓာနဖြစ်သောကြောင့်လူသားများ၏စိတ်ထားသာဖြူစင်နေပါက နေ့ရက်တွေဖြူစင်ကြပေ တော့မည်။ လတွေလည်းသစ်လွင်နေကြပေတော့မည်။ နှစ်တွေလည်း အစဉ်အမြဲဖြူစင် တောက်ပ၍သာနေပေတော့မည်။ ဘဝတွေလည်း ဖြူစင်သစ်လွင်တောက်ပနေမည်သာ ဖြစ်တော့သည်။ ထုို့ပြင် နုိုင်ငံတော်ကြီးသည်လည်း တောက်ပနေမည်ဖြစ်သလုို ဒီမိုကရေစီ သည်လည်း လင်းလက်နေမည်သာဖြစ်ပါတော့သည်။
သုို့ဖြစ်၍ နုိုင်ငံသူ နုိုင်ငံသားအားလုံး မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဓမ္မနည်းလမ်းဖြင့် ဓမ္မနှစ်သစ်ကို ကူးမြောက် နုိုင်ကြပါစေ၊ စစ်မှန်သောဒီမုိုကရေစီသုို့ ဦးတည်သော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေသားဟု။
By Wisdom of Dhamma